FARIIN SUXUFI: DUCAALE IYO DAYACA AMNIGA MUQDISHO!!!?. | gobolada.com
FARIIN SUXUFI: DUCAALE IYO DAYACA AMNIGA MUQDISHO!!!?.
Dec 23, 2018 - jawaab
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro aad looga xumaaday ceebna ku ah Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale, weeraradaas wuxuushnimada ahaa waxaa ku dhintay in ka badan 37-ruux oo isugu jiray Wariyayaal, Askar, Saraakiil iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan, halka ay ku dhaawacmeen 40-meeyo kaleeto.
Goobta weerarka lagu qaaday waa barta koontaroolka ee laga galo Tiyaatarka Qaranka Soomaaliyeed, kamana foga aqalka Villa Somalia ee looga taliyo dalka, waana xarun aad u muuhim u ah marka aad ka eegto dhan kasta iyo Taalada Daljirka Dahsoon, waana kugu ceeb Mudane Wasiir in goobahaasi qaraxyo ka dhacaan dad badan oo wax gal ahina naftooda ku waayaan.
Mudane Wasiir Dayaca kaa heysta amni xumida ka jirta magaalada Muqdisho waxay gaartay heer aan ka soo laabasho lahayn, dad badan waxay aaminsan yihiin in jahwareer xoog leh uu kaa heysto, isla markaana laamaha amaanka qaarkood ay ku lug leeyihiin, maxaa yeelay meelaha ay ka dhacaan iyo sida ay u dhacaan, waxay shacabka Soomaaliyeed gelisay dareen iyo cabsi aad u badan taasoo ay ka qabaan Wasaaradda Amniga Qaranka Soomaaliya.
Amni darida ka taagan magaalada Muqdisho iyo baaritaanada aad sheegtaan ma ahan mid dhiirigalinaysa Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka caasimada oo maalin walba dilal toogasho ah iyo qaraxyo lagu laynayo.
Soomaalidu waxay ku maah-maahdaa “Mayd maxaa ugu dambeeyey…? Kii la sii waday..”, mar walba oo aad ka hadlayso xaalada amniga iyo marka qaraxyo dhacaan waxaad sheegtaa hadal lagu yaqyaqsado, aan u qalmin inuu Nin dayac amni uu heysto uu ka hadlo, waana isla quman tahay.
Qorshahaaga Amni waxaa ka muuqata inay ka jirto jahwareer hagida hannaanka Amniga, haddii ay ahaan lahayd min adigoo Wasiirka Amniga ku magacaaban iyo Taliyayaasha ciidanka waxaana soo noqnoqonaya fadeexadaha ku wajahan dhinaca amniga Muqdisho, ayada oo la weerarayo xarumaha ugu muhiimsan dowladda, shacabka iyo waxgalka bulshada oo xabaal u dhammaanayaan.
Waxaa kale oo Ceeb kugu ah in aad Warbaahinta ka soo hormuuqato tacsi iyo goodis aan afka labadiisa baar dhaafsiisneen ku hadaaqdo, taasna xalka ma ahan ee waa inaad dayaca amniga kaa heysta wax muuqda ka qabataa ama booska baneesaa si loo helo shaqsi kaa mudan xilka wasaarada Amniga dalka oo aadba moodo inuu yahay xil laguu ilduufay.
Ugu danbeyntii Mudane Wasiir waa in aad qaadataa go’aan adag kana duwan midkii ku dhawaadka labada sano aad magacaaban tahay ka badalan, go’aankaasna waa inuu noqdaa midkii aad isku casili lahayd.
W/Q: Bile Mohamed Abdi (Bile Baastey).